Caqabadaha ugu Wanaagsan Eeyaha - Wax kasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato! | Eeyaha Adduunka
Susana godoy | 13/10/2021 11:16 | Qalabka eyga
Caqabadaha eyda ayaa ka mid ah qodobbada amniga sida ugu fiican ee aan u baahanahay. Kaliya maahan naftooda laakiin sidoo kale annaga ama gurigeenna. Waa dhammaystir caan ah, laakiin maanta waxaad ka ogaan doontaa xitaa wax badan oo iyaga ku saabsan, maxaa yeelay in kasta oo ay u muuqatay sidii, haddana ma aadan ogeyn wax walba oo ku saabsan cunsurkan.
Iyada oo leh caqabado ey waxaad ku abuuri kartaa meel kooban gurigaaga, si xayawaankaagu aysan u dhaafi karin mar kasta oo ay rabaan. Maadaama qaarkood ay waxyeello u geysan karaan mana doonayno taas gaar ahaan markaan guriga joogin. Marka, marka hore, caqabadaha ayaa noqda aasaaska. Ha seegin wax kasta oo soo socda!
Iris Ohyama, Albaabka ...
Badbaadada 1aad Fudud Xir ...
Xannibaadda Hauck ...
Sakura SS5259 - Caqabad ...
Lindam 051298 Fudud
Caqabada Pawhut ...
1 Maxaad u soo iibsanaysaa caqabad eyga?
2 Noocyada caqabadaha eyga
2.1 La fidin karo
2.4 Boolal la'aan
3 Sida saxda ah loo doorto caqabad eyga
4 Ma mudan tahay in la iibsado caqabad eyga?
5 Xagee laga iibsan karaa caqabad eyga jaban
Maxaad u soo iibsanaysaa caqabad eyga?
U beddel qol guriga dhexdiisa qolkaaga: Mid ka mid ah fikradaha waaweyn ee aad la imaan karto adigoo u mahadcelinaya caqabadda eyga waa tan. Ka soo qaad inaad haysato qol yar laakiin aadan hubin waxaad ku samayn karto. Markaad haysato xayawaan rabaayad ah, fikradaha ayaa laga yaabaa inay durba soo boodaan iyagoo aan awoodin inay ka fogaadaan. Sidaas oo kale waxaad u isticmaali kartaa inaad kala xadeyso qolka la sheegay, inaad u kala qeybiso aagag ama aad dhigto qeybta albaabka oo boos badan uga tag xayawaankayaga. Maadaama mararka qaarkood qasab ma aha inay noqoto qol laftiisa, laakiin aag aynaan runtii isticmaalin ama ka faa'iidaysan.
Ka ilaali inay soo galaan aagga guriga: Mid ka mid ah shaqooyinka lagama maarmaanka u ah caqabadaha ayaa ah tan. Sababtoo ah haddii aan ka tagno, xayawaanku waxay galayaan kana baxayaan qolal kala duwan maalintii oo dhan. Waxay jecel yihiin inay ogaadaan waxa ku jira mid kasta oo iyaga ka mid ah. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah haddii aad rabto ka ilaali inay ku wareegaan guriga, dhig carqalado meelaha laga soo galo ama aagagga iyaga laga mamnuucayo. Si ay jidkooda u xanibto oo aan wax loo qaban karin si wax looga qabto.
Ka ilaali inay kor iyo hoosba jaranjarada u koraan. Sababtoo ah haddii aan ku sameyno carruurta, xayawaanka sidoo kale. Xaaladdan maxaa yeelay lDhibaatooyinka caafimaadku waxay noqon karaan kuwa ugu waaweyn mana doonayno in laabatooyinku ku xanuunsadaan. Sidaa darteed, si looga fogaado jirrabaadaha, had iyo jeer way fiican tahay in sidan looga hortago waxayna la jirtaa caqabadaha eeyaha.
Ka hortag inay dibadda u baxaan: Gaar ahaan kuwa yar yar ayaa ah kuwa ugu nasan oo waa run in mararka qaarkood aanan u xakamayn karin sidaan jeclaan lahayn. Markaa, waa inaan siyaalo gaar ah uga fikirnaa inaan awoodno inaan mar walba si wanaagsan u maamulno. Caqabadaha ayaa sidoo kale ka hortaga taxaddar la'aanta in la joogo sidaas darteedna, inay dibadda u baxaan. Had iyo jeer waan ku ilaalin karnaa nabadgelyadooda tanina waxay sidoo kale noo sahlaysaa neefsashada.
Noocyada caqabadaha eyga
La fidin karo
Waa mid ka mid ah noocyada ay jecel yihiin dad badan sababta oo ah sida magaceedu tilmaamayo, waxaa laga dhigi karaa mid ballaaran ama ka yar. Maxaa taa inoo sheegaya lagu dhejin karaa meelo kala duwan taasina waa wax aan jeclahay. Waxay la jaanqaadi doontaa ballacyada kala duwan ee albaabbada, sida aan ugu baahanahay, inaan awoodno inaan ka dhigno kuwo yaryar.
Haddii aad ku fikirayso inaad deyrka eeyga bannaanka dhigto, markaa birta ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican. Aad bay u adkaysi u leeyihiin sababtaas awgeed, taas oo ah inay bannaanka dhigaan, laakiin taas kaliya maahee laakiin dhammaan eeyaha jecel inay wax cunaan. Sababtoo ah dhammaystirka sidan oo kale ah waxay yeelan doonaan wax aad u dhib badan. Sidoo kale waxay ku habboon tahay eeyaha waaweyn, si hufan sababtoo ah iska caabintaas aan soo sheegnay.
Kaliya ka fekerida caqabadaha alwaaxyada qaar, waan ognahay taas qurxinta gurigeena ayaa noo mahadcelin doonta. Sababtoo ah qoryaha ayaa ku habboon in la isku daro gees walba oo guriga ah. Marka, waa mid kale oo ka mid ah xulashooyinka xarrago leh dhinac ahaan laakiin sidoo kale wax ku ool ah dhinaca kale. Maadaama ay sidoo kale si fiican u ilaalin doonaan xayawaankaaga. Inkasta oo ay run tahay in qaarkood doortaan inay xoqaan ama qaniinaan.
Waxaan had iyo jeer leenahay ikhtiyaarada ugu kala duwan si aan u awoodno inaan ku raaxaysano faa'iidooyinka ugu fiican. Xaaladdan, waxaan ka hadlaynaa carqalado bilaa dabool ah. Xalka ugu fiican si looga fogaado in la qodo aagagga guriga. Waxaa fiican inaad u tagto fikraddan oo kale oo timaadda bilaa boolal. Waxaa badanaa la socda nooc ka mid ah koobabka nuugista iyo jillaabyo qaarkood oo ku soo biiri doona. Markaa waxay isku dayi doontaa inay dhejiso oo ka saarto markaad u baahato. Maadaama habkan uu kaa caawin doono inaad beddesho meelaha sida waafaqsan baahiyahaaga iyo kuwa xayawaankaaga.
Sida saxda ah loo doorto caqabad eyga
Waxyaabaha: Waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah in la tixgeliyo. Maaddadu waxay go'aamin doontaa xoogga iyo cimri dhererka caqabadda eyga, marka waa inaan had iyo jeer dooranaa si aad u wanaagsan. Biraha waa mid ka mid ah fikradaha ugu wanaagsan ee iska caabintaas aan soo sheegnay, dabcan haddii aad rabto inay u ekaato sida aad u qurxisay, malaha midka alwaaxa ah ayaa ah midka ugu badan ee la tilmaamay. Waa inaad si taxaddar leh uga fikirtaa waxaad raadineyso ama ku habboon intaadan tallaabada qaadin.
Altura: Arrin muhiim ah halka ay jirto maxaa yeelay waxaan u baahannahay in xayawaankeenna la meeleeyo meesha ay tahay iyo tan, marka hore waa inaan ka fikirnaa xajmiga xayawaanka. Sababtoo ah halkaas ayaan ku go'aamin doonaa dhererka caqabadda. Caqli ahaan waxay noqon doonaan waxoogaa ka sarreeya haddii aan ka hadlayno eey dhexdhexaad ah ama weyn. Laakiin kuwa yaryar, uma baahna dhererka intaa le'eg maxaa yeelay ma baxsan doonaan.
Ballac: Halkan, si aad u ogaato inta ay le'eg tahay caqabadaha eeygu, waa ka feker meesha aan doonayno inaan dhigno. Sababtoo ah marmarka qaarkood waxay ku jiri doonaan oo kaliya albaabbada ama arches -ka u shaqeeya sidii albaab laga soo galo, markaa halkaas waa inaan ku cabbirnaa ballaadhkooda. Laakiin haddii ay tahay in la kala saaro boosaska, markaa maskaxda ku hay in ballaadhku ka weynaan doono Sidaa darteed, waa inaan had iyo jeer si wanaagsan u qaadnaa tallaabooyinka si aynaan u waayin ama aynaan u dhammaan.
Nidaamka Hagaajinta: Halkan baahiyahaagu mar kale ayay soo galaan. Sababtoo ah waad awoodaa waxay leeyihiin caqabado ey oo leh boolal si fiican loo hagaajiyo ama dhinaca kale, koobabka nuugista. Marka kiiska dambe uma baahnid inaad qoddo gidaarka ama albaabka laftiisa. In kasta oo ay run tahay in kuwa ugu badan ay yihiin kuwa la qodayo, maxaa yeelay kuwa kale badiyaa waa meelaha meelaha sida jaranjarada.
Nidaamka furitaanka amniga: In kasta oo qaar go'an yihiin, qaar kalena waxay leeyihiin a nidaamka furitaanka oo leh amni guud. Si looga fogaado in xayawaanku ay u furi karaan hab fudud, inkasta oo ay run tahay inaanan iska caabin doonin. Markaa labada dhinacba badiyaa waa go'an yihiin oo qayb dhexe ayaa la furi karaa oo la xiri karaa marka la doono, markaad u baahato.
Ma mudan tahay in la iibsado caqabad eyga?
Runtu waxay tahay haa, caqabad eyga ayaa had iyo jeer mudan in la iibsado Laakiin haa, waa inaad had iyo jeer taqaanaa sida loo doorto iska caabinta weyn ee ay yeelan karaan. Sababtoo ah sidaan hore u soo sheegnay, haddii aan la macaamilayno eeyaha waaweyn, waxaan dooran doonnaa ikhtiyaar xooggan oo ka sarreeya ama ballaaran. In kasta oo ay ka soo horjeeddo noocyada yaryar. Laakiin si kastaba ha ahaatee, waxaad yeelan doontaa meel si fiican loo kala soocay oo aad ku xasili karto ama ku xasili karto oo aysan geli karin. Sababtoo ah waxa carqaladaha eygu ka aamin badan yihiin hababka kale ee kala -soocidda.
Xagee laga iibsan karaa caqabad eyga jaban
Kiwoko: Kiwoko sidoo kale waxay leedahay caqabado taxane ah oo eey ah oo ay tahay inaadan seegin. Sababtoo ah waxay ka samaysan yihiin agab adkaysi leh, isla mar ahaantaana, ku dhegan derbiga oo fidsan kara. Taas oo aan xusin waxaad leedahay moodooyin aan u baahnayn in lagu xiro darbiga.
Amazon: Sidee bay u yaraan kartaa, Amazon waxaad ka ogaan kartaa caqabadaha aan dhammaadka lahayn eeyaha. Sababtoo ah kaliya markaa waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato dhammaystirkaas aad doorbidayso oo aad had iyo jeer ka fikirto baahida xayawaankaaga. Alwaax ama biro leh cabbirro kala duwan ayaa noqon doona qaar ka mid ah xulashooyinka aad mar walba ka ogaan doonto shabakadda.
Leroy Merlin: Leroy Merlin waxaad sidoo kale ku yeelan kartaa dhowr ikhtiyaar oo ah qaabka caqabadaha eeyaha. Sababtoo ah waxay leeyihiin dhammaystirka ugu adkaysi badan iyo dabcan, adabtarada sidaa darteed waxay mar walba la qabsan karaan booskaaga. Laga bilaabo kan ugu yar ilaa kuwa la qabsan kara ama dabacsan.
Tendenimal: Waa mid kale oo ka mid ah bakhaarradii aan laga tegi karin. Waxay sidoo kale qayb ka yihiin xulasho ballaaran marka la eego caqabadaha waxaa loola jeedaa. Ku fiican inaad dhigato albaabka jaranjarada ama albaabbada. Si aan uga hortagno inay baxsadaan ama waxyeello soo gaarto. Hadda waa inaad doorataa midka kugu habboon!
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Qalabka eyga » Caqabadaha eyda
Chip -ka ugu fiican eeyaha iyo haysashada xayawaankaaga oo si fiican loo kontoroolo